I-paraffinotherapy yezikhuhlane ekhaya
Ungakhuluma ngezinto eziwusizo zepharafini isikhathi eside. Enye yezinzuzo ezinkulu zeparafini, esetshenziselwa izinjongo zezimonyo nezempilo, yikho amandla akhe okushisa okuphezulu. Iphafini iyancibilika ekushiseni kwama-52-54 degrees, ukuthola i-viscous viscous uniform color color.
Kulashwa kweparafini, kuphela i-paraffin, isetshenziswe i-paraffini, esetshenziselwa izindawo zesikhumba ngendlela yezicelo. Ungesabi ukushisa okuphakeme kweparafini, ube nomhlaba ophansi we-conductivity oshisayo, i-parafini inika ukushisa kancane kancane futhi ngezingxenye ezincane, ngakho kuphephile ngokuphelele. Phakathi nenqubo, iparafini elishisayo, elisezinhlakeni zesikhumba, landa nge-1, 5-2 degrees. Ukushisa okuncane, okushisa kancane, kufaka hlangana nokuphendula okunenzuzo nokuhlangeneko. Izikhala ze-intercellular zikhulisa, ungqimba olungaphezulu lwesikhumba luyancipha, ama-pores esikhumba avulekile, nokukhukhuma kwanda. I-parafini ihlukanisa kahle indawo yesikhumba, ethintekayo, umswakama owakhiwe awukhiphi ukufudumala, kodwa uphinde ungene esikhumbeni, ubuyekeze ibhalansi yamanzi. Futhi ngezinhloso zokuzicabangela, iparafini isetshenziswa ngokunembile ngenxa yendawo yayo yokwenza kahle isikhumba. Ngokwandisa izinga lokushisa kwesikhumba, ukugeleza kwegazi kuyanda. Lokhu kunomthelela ekuvuseleleni okusheshayo kwezicubu nokuphulukiswa kwamanxeba, ukuthuthukiswa kwamajoyina. Ngenxa yalezi zakhiwo, ukwelashwa kweparafini kuye kwasetshenziswa kabanzi emithi, ekwelashweni kwemikhuhlane, izifo ezihlangene, ukulimala okuhlukahlukene.
Ikhono lephalafini lizokwehla ngokuvolontiza ekupholiseni, enye impahla ehlukanisiwe yeparafini. Umphumela wesenzo "sokucindezela" separafini, utholakala emva kwemizuzu engu-25-30. Uhlaka lweparafini, ukupholisa, luhlanganisa zonke izicubu eziseduze, okusiza ukushelela isikhumba. E-cosmetology, impahla "elula" efana neparfini isetshenziselwa ukulwa nobuqhopho obusweni, kodwa cishe njalo inqubo ye-paraffin yokwelapha ayikwenziwa njengenqubo yokuzimela, kodwa njenge "maski ephezulu". Esikhathini esingqimba sekhrimu noma lotion equkethe i-collagen, isendlafini isetshenziswa. Ngenxa yesenzo esishisayo, izingxenye ezisebenzayo zekhilimu zingena ezingeni elijulile lesikhumba, ngenxa yezikhala eziphakathi kwe-intercellular.
Inqubo yokwelashwa kweparafini ekhaya kulula futhi iyaqondakala. Okokuqala futhi okubaluleke kakhulu, udinga i-parafini ngokwayo, engathengwa ekhemisi noma e-salon enhle ngokukhethekile kulezi zinqubo. Cabanga nge-nuance yokuthi inqubo eyodwa idinga isilinganiso sama-kilogram amabili weparafini. Iparafini ifakwa ezitsheni ezigcotshwe futhi zicibilikiswe ekugezeni kwamanzi. Gwema ukuthola amanzi ezintweni ze-wax. Isikhumba ngaphambi kwenqubo yokwelashwa kweparafini kufanele ilungiswe. Khipha isikhumba ngesikhalazo, futhi emva kwalokho endaweni yesicelo ngeparafini, sebenzisa ukhilimu ophuthumayo odlala indima ye "mask main". Ngaphambi kwesicelo, hlola ukushisa kwepharafini ngemuva kwesandla ukuze ugweme ukuthi kungenzeka ukushiswa. Naphezu kokuthi i-parafini iyashisa ayilula, kungcono ukuba iphephile futhi uhlole izinga lokushisa lomuthi oshisayo. Uma wenza ukwelashwa kweparafini ezandleni, udinga ukufaka isandla sakho eparafini kuze kube sezingeni lesibindi, emva kwemizuzwana engu-10, ukuyikhiphe bese uyibuyisela ebhodini. Ngakho-ke, phinda izikhathi ezingu-5-8, kuze kube yilapho ibhulashi limbozwe ngephalafini, bese ugoqa ngesandla ngendwangu ye-polyethylene futhi phezulu ukuze ufake i-mitten. Ngemuva kwemizuzu engaba ngu-25-30, susa ama-mittens ne-polyethylene, bese ususa i-paraffini wax ngakwesobunxele kusuka esihlakalweni kuya eminwe. I-Paraffinotherapy yezinyawo yenziwa ngokuvumelana nesimiso esifanayo.
Uma wenza ukwelashwa kweparafini endaweni ebusweni, kufanele kucatshangelwe ukuthi emva kokufaka koqweqwe lokuqala lweparafini kusetshenziswe ebusweni, i-cloth encane ibekwe phezulu, bese kusetshenziswa ezinye izendlalelo ezine-4-5, futhi emva kwamaminithi angu-20 kubalulekile ukususa imaski, ukusuka entanyeni kuya ebunzini. Sebenzisa iparfini esetshenzisiwe ayinangqondo, njengoba ilahlekelwa izinto zayo eziwusizo, ngakho-ke inqubo entsha, udinga ingxenye entsha yeparafini. Iparafini isetshenziswa ngempumelelo ekwelapheni kwemikhuhlane.
Indlela yokwelashwa kwephalafini isetshenziswa kanjani amakhaza ekhaya?
Njengomthetho, uphawu oluvame kakhulu olubandayo lubandayo. Kulesi simo, inqubo yokufudumala impumu nephafini iyasiza kakhulu. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukushisa iparfini emanzini okugeza (noma kunjalo, ungashisi iparafini emlilweni ovulekile, ungaqhuma). Ihlanganiswe ngo-3-4 izendlalelo zesigcawu esenziwe ngeparafini, efakwa i-polyethylene futhi isongwe ngendwangu yensiza ye-flannel. Le compress kufanele isetshenziswe endaweni yempumu. Lapho ulungiselela kuyinto efiselekayo ukusebenzisa iparfini yezokwelapha, edayiswa ekhemisi. Uma i-compress ihlilile, engeza iparafini eshisayo kuze kube yinkimbinkimbi bese uphinda inqubo yemizuzu engu-20. Le nqubo iphakanyiswa ukuba yenziwe ebusuku, izono zesisu zifudumala kahle futhi ngosuku olulandelayo kuzoba ngcono esimweni.
Lapho ukwelapha ukukhwehlela, ukufudumala kwezinyawo ngeparafini kuthathwa njengokusebenza kahle. Gauze cindezela nge parafini, egcwele izinyawo futhi zimbozwe ngengubo. Uma ukhwehlela ezinganeni, kunconywa ukusebenzisa izicelo ngeparafini eshisayo endaweni yangemuva. Ngaphambili, ngemuva kwengane kufanele ufake i-diaper. Iphafini encibilikisiwe ifakwa kwi-gauze egoqwe ngeziqephu eziningana, futhi igxile emhlane wengane futhi ihlanganiswe ngengubo. Inqubo iqhubeka kuze kube yilapho iparafini ipholile.
Kodwa ungakhohlwa ukuthi njengalokhu kunoma iyiphi inqubo yokushisa, ekusetshenzisweni kweparafinotherapy kunezinombolo zokuphikisana. Akunconywa ukusebenzisa izinqubo ezishisayo ngeparafini kubantu ababhekene nokucindezelwa kwegazi eliphezulu, abanezifo ezithathelwanayo, nesifo sikashukela, ama-varicose veins, stenocardia, amanxeba avulekile. Ngenxa yokungabi nakho konke lokhu okungafani, ungasebenzisa izindawo ezinhle zeparafini ukuze kuzuze ubuhle bakho nempilo yakho. Inqubo ye-paraffinotherapy ilula futhi yonke indawo, ingenziwa kunoma iyiphi ingxenye yomzimba, futhi ingenziwa kunoma iyiphi i-salon yobuhle noma ekhaya.
Izinkolelo ezivamile mayelana ne-thrush
Izinzuzo kanye nokuqeda isapu yokulwa ne-antibacterial
I-Tavolga: zokupheka, uhlelo lokusebenza, incazelo
Imithetho yokulala kahle
Imiphi imibala izingane ezizithandayo kusukela eminyakeni engu-8 ubudala?
I-Day Energy 2015: Siyakuhalalisela izinkondlo kanye ne-prose yabalingani
Isaladi nenkukhu namakhowe
Perfect oda efulethini
I-Horoscope ka-2010 nge-tiger yokuhlasela
Ama-diapers ezincane ezisasebenza
Izinwele ezithandana zamantombazane
ULyudmila Artemieva: "Ngithukuthele ngaphandle kokuziveza"
Ukunakekelwa ebusweni nokwehlo
Ukupheka kobuhle kusukela eCleopatra enhle kakhulu
Ukuphepha kwezingane lapho ubhukuda emanzini avulekile